Rabbit of French Jicol breed: nkọwa, foto, ọdịnaya, nlekọta na nri - Anụ anụ ọhịa na-agba - 2020
Jikol rabbit: atụmatụ ịzụlite n'ụlọ
Otutu ugbo ala ndi ozo na ugbo ndi ozo bu uzuzu umu anu. Maka alaka ụlọ a nke anụ ọhịa, àgwà nke azụ ahụ dị oke mkpa dị ka uru bara ụba. Ihe onwunwe a zuru oke site na ngwakọ French ụdị nke rabbits, chicol.
Nhọrọ na ndokwa nke mkpụrụ ndụ
Nlekọta na ịdị ọcha
Ihe ị ga-eri
Ịzụ ụmụ na-azụ ụmụ n'ụlọ
Nkọwa na atụmatụ nke ngwakọ
Akara Jikol bara uru maka uru bara uba, ya mere ihe mgbaru ọsọ nke ịzụ ụmụ rabbits bụ anụ na-edozi ahụ nke kacha mma. Ndị na-eto eto nọ na-enweta ihe ruru 50 g arọ kwa ụbọchị. Ihe a na-emebu na mpempe anụ na igbapụ bụ ihe karịrị ọkara nke oke oke oke bekee. Mgbe a na-azụlite ìgwè a, anụ ụlọ ga-akwadebe maka eziokwu ahụ bụ na nsogbu ga-ebili n'oge a mụrụ nwa. Iji chebe ịdị ọcha nke eriri ngwakọ ahụ, ọ dị mkpa itinye nanị insemination, nke chọrọ nnukwu ụgwọ, ya mere ọ bara uru ịzụlite rabbits ndị a n'ọhịa buru ibu.
Ị ma? Oke oyibo na-ejikarị 10-12 ụmụaka, bụ ndị a mụrụ mgbe obere ụbọchị gestation dị mkpirikpi. Ndị nwoke dị njikere maka ịzụ nwa na afọ asaa, na nwanyị - site na ọnwa anọ. Nke a pụtara na na otu afọ, nwanyị oke rabbit nwere ike ịpụta ihe ruru ogo asatọ nke mkpụrụ.
The rabbits nke chikol ìgwè bụ ngwakọ, nwetara dị ka a n'ihi ọrụ nhọrọ nke French biologists. Ruo taa, ụlọ ọrụ French "Hipfarm" na-ejide onwe ya maka ịzụlite ụdị nke a. Ụlọ ọrụ nwere alaka na-ere anụmanụ ndị a na mba dị iche iche nke ụwa.
A na-ese uwe na-ekpuchi Jikol ka ọ na-acha na agba: na-abụkarị ihe dị iche iche nke ọcha, isi awọ na agba aja aja. Ịdị ọcha nke agba ntụ na-emetụtakwa: nke a bụ mgbe ntutu na ntị na imi nwere agba chaa chaa karịa mkpuchi aji. Ụdị ọkọlọtọ:
ahụ ogologo 50-54 cm;
ahụ dị arọ 4.5-5 n'arọ;
obere isi na-anọdụ n'oche olu;
imi obere elongated;
azụ dị obosara ma dị mma;
azụ nke ahụ dị nnọọ ukwuu n'ihu;
anya agba - acha uhie uhie na ncha na-egbuke egbuke;
anya na-ekpuchi iche;
ewe me ka afọ-ya di ala;
ụkwụ ụkwụ dị mkpụmkpụ ma dị iche;
ọdụ dị mkpụmkpụ na ogologo, na-ejidesi ahụ ike;
obere ntị (ruo 11 cm), na-agbapụta n'otu akụkụ.
Lelee umu ahihia kacha mma nke rabbits.
Hikol bụ ezigbo ewu ewu na broiler n'etiti ndị na-azụ anụ ọhịa rabbit, ebe o nwere uru ndị dị na ya:
uru ngwa ngwa;
ezi mkpụrụ nke anụ mgbe e gbusịrị (60% nke oke ahụ dum);
Ehoro rabbits na-ebute ihe dị arọ 4.5-5 (ndụ dị ndụ) site na ọnwa anọ, ndị nnọchiteanya nke ụdị ahụ adịghị adaba na abụba abụba. Otu n'ime uru nke ụdị bụ ụdị mma nwanyi. Onye obula nwere ike iweta umuaka 10 ma obu 12 maka otu okrol. N'ihe na-emepụta oke rabbit, ụmụ nwanyị na-amụ nwa na-ewetara ugboro iri na iri n'afọ, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-adighi mma maka ozuzu. Enweghị ike ịba uru nke anụ ahụ nwere ike ịsị na enweghị ike mmepụta nke okike na-enweghị ọdịda nke àgwà ndị nwere ngwakọ. Enwere ike ịmịcha mkpụrụ nke ozuzu nanị site na mkpịsị ahụhụ. Mgbe ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-agafe ụdị anụ ahụ, ọ dị ọcha nke ụdị anụ ahụ mgbe ọgbọ 2-3 gasịrị.
Iji nweta nsonaazụ dị elu, onye na-azụlite rabbit kwesịrị inye ọnọdụ kachasị mma maka ịchekwa anu ulo: ebe dị ọkụ na ọkụ, ihe ndina akọrọ, nri kwesịrị ekwesị. Ọ dị mkpa ka ị ghara ichefu banyere ịgba ọgwụ mgbochi oge, n'ihi na ụmụ anụmanụ ndị a nwere ike ibute ọrịa ọrịa.
Ị ma? Rabbits nwere ukwu nke ukwu ụkwụ na-ekwe ka ha daa elu ma dị elu. Ụmụ anụmanụ ndị a na-ebulite n'elu ọkara mita site na ala ma na-awụlikwa elu ruo mita 1.2 m.
Mgbe ị na-edebe rabbits nke a na-enye n'ụdị ụlọ, a ga-atụle ihe ndị na-esonụ:
Rabbit jikol na-enwe n'ime sel ndị nwere lattice na ala. Ebe ọ bụ na akpụkpọ ụkwụ nke anụmanụ dị mma, ọ ga-emerụ ha ahụ. Ala dị n'ụdị grid ma ọ bụ grid ga-eme ka nkedo dị mfe karị, ebe ọ na-enyefe n'efu n'efu. A na-eji osisi ma ọ bụ ígwè rụọ ya, nke ikpeazụ ga-akacha mma, ebe ọ bụ na mkpanaka dị n'ime afọ ole na ole na-eme ka akụkụ osisi nke ụlọ ahụ ghara ịdị irè.
A na-ekpuchi ala ya na ahihia ahihia, nke gbanwere ka ọ bụrụ ugboro 2-3 ugboro n'izu. Dị ka ihe nkwụsịtụ, ị nwekwara ike ịchọrọ osisi soda abụghị oké nkume. Na-awụba n'oké osimiri kwesịrị hygroscopic na ọkụ.
Enwere ike itinye mkpụrụedemede n'ọtụtụ tiers - otu n'elu nke ọzọ. N'otu oge ahụ, a ghaghị icheta na ọ bụrụ na ọ bụghị ikpe, a ga-etinye ala ndị dị ala n'ala ma ọ bụ n'ala nke onye na-agụ anụ ọhịa, ọ ga-abụ ụkwụ ma ọ bụ ewu n'okpuru ha (ọbụlagodi 40-50 cm elu). Nke a dị mkpa iji mee ka ọdịiche dị n'etiti ikuku oyi dị nso n'ala na ala nke onu.
Ogo nke ụlọ ndị ahụ maka rabbits na brood: ogologo ụlọ ahụ dị site na 175 ruo 185 cm, obosara ya ruru 1 m, nke dị elu bụ 55-70 cm. Rabbits kwesịrị inwe oke ohere maka ijegharị n'efu. A na-etinye "mgbanaka nne" osisi na ụlọ ndị rabbit n'ihu okol: obere igbe osisi na oghere maka ntinye. Ụbọchị ole na ole tupu osikapu ahụ, nwanyi na-ewepụta ihe ọ na-esi na aji ya ma kpuchie ala nke igbe ahụ, nke ọ na-akwadebe maka akwa ụmụaka ahụ dị nro. Mgbe oge ruru, oke bekee na-aga n'ebe ụlọ ọgwụ na-amụ nwa, ebe amụrụ ụmụaka. Ha ga-ebi n'ebe ahụ ruo mgbe ha tolitere.
Ndị mmadụ na-eburu anụ ahụ ruo kilogram 5 n'arọ, n'ihi ya onye nke ọ bụla ga-achọ oghere nke ọ bụla ruo 130 cm n'ogologo, ruo 80 cm n'obosara, ruo 60 cm elu.
Mgbe otu na-echekwa ọtụtụ ụmụ anụmanụ na otu oghere, a na-agbakọta akụkụ ya dị ka ndị a: maka oke rabbit, oke ogologo rabbit dị mita 1, obosara na ịdị elu dị 60 cm.
Oke oke bekee nwere ike inwe ogige ulo ahihia. Na-emekarị, nri ahihia nri na-adị na mpụga nke ụlọ ahụ ka rabbits wee nwee ike iri ahịhịa ndụ, ma ha enweghị ike ikesa ndepụta gburugburu ụlọ.
Maka ọka na nri n'ime oghere ahụ, a na-enye mgbidi dị n'akụkụ mgbidi. Site na ala ụlọ a na-eri nri, a na-enye ihe dịka cm 20, nke a na-egbochi ụmụ anụmanụ ka ha merie n'ọkụ azụ.
A na-etinye tankị na-aṅụ mmiri na mgbidi dị n'ime ime ụlọ dị nso site na ala (15-20 cm), nke mere na anụmanụ ahụ nwere ike ịṅụ ihe n'emeghị ka ụkwụ ya bilie.
N'oge ọkọchị, a pụrụ itinye cages rabbit ma n'èzí ma n'ime ụlọ. Ọ dị mkpa ịhọrọ ebe a na-echebe site na ifufe oyi na-atụ oyi na ntanetị. Enweghịkwa ike ịkụ elu ụlọ ahụ na ìhè anyanwụ, dịka ụmụ anụmanụ ga-ata ahụhụ na okpomọkụ.
Ọ dị mkpa! Anụ ọhịa bea a na-agba na-amị mkpụrụ sitere na ụbọchị 28 ruo 31, ọ dịkwa njikere ozugbo ịlụ ya na ifatụ mmiri ozugbo ọ nwụsịrị. A na-ejikarị ụmụ ahụhụ mee ihe n'ime 1-3 ụbọchị mgbe a mụsịrị nwa, a na-ewerekwa rabbit ka ọ mụọ ụmụ.
Maka oge oyi, a na-ebufe mkpụrụ ndụ ahụ gaa n'otu ụlọ dị mma. Kasị mma okpomọkụ maka ọdịnaya nke a ngwakọ ìgwè bụ + 20 ... +23 Celsius C. Ọ bụ ekwesighi ikwe ka thermometer daa n'okpuru + 16-17 Celsius C, akpan akpan ke ini etuep. A na-edebe ndị na-emepụta ihe na ndị na-arụ ọrụ n'otu ebe, rabbits na-ebi n'otu ìgwè nke mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ n'otu ụlọ.
Ọnụ ụlọ nke mkpụrụ ndụ ndị ahụ nọ na-emepụta kwa ụbọchị. Otu ụbọchị ka e mesịrị, a na-ehichapụ mkpụrụ ndụ ndị ahụ ma gbanwee ihe ruru unyi ka ọ ghọọ nkụ. Otu ugboro n'ọnwa, mkpụrụ ndụ chọrọ nhichacha na disinfection zuru ezu. Iji mee nke a, a ga-ewepụta ha n'oge na-adịghị anya site n'aka ndị bi na ya, emesịa ha na-ehicha ma saa ya site na-arịa ọrịa na ndị na-edozi ahụ. A na-arụkwa disinfection ọ bụla a chọrọ na May, n'oge mmalite ụgbọ elu anwụnta ahụ. N'oge a, anwụnta ndị inyom na-agbasa ọrịa ndị na-efe efe bụ ndị dị ize ndụ maka rabbits, ya mere, iji mee ka ụmụ ahụhụ ndị a kwụsị, a na-esi na tebụl ma ọ bụ mmanụ engine.
Ị ma? Okwu ntaneti di n'otu aka dika umu mmadu, ma ha nwekwara ike nuru olu di elu karia ihe ndi mmadu nwere. Ezigbo ntị na-eje ozi dị ka ndị na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike ịgafe onwe ha n'otu n'otu - ọrụ nke rabbits jiri iji chọpụta ebe ụda si abịa.
All rabbits ke ugbo na-vaccinated megide myxomatosis na malitere ịrịa ọrịa hemorrhagic. Nke a nwere ike ịbụ otu ịgba ọgwụ niile maka ọrịa abụọ ma ọ bụ ọgwụ dị iche iche maka ọrịa ọ bụla.
Usoro nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nke rabbits site na ọrịa ọrịa hemorrhagic:
Nke mbụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa - na zuru 6 izu, mgbe iru a ahu arọ nke 0,5 n'arọ.
A na-eme nke abụọ ịgba ọgwụ mgbochi ọnwa 3 mgbe mbụ. Ọ dị mkpa iji dozie nsogbu ahụ kpatara.
A na-emechi ọgwụ mgbochi niile na etiti ọnwa isii.
Tupu ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa megide myxomatosis, onye na-azụ anụ ọhịa rabbit aghaghị ijide n'aka na anụ ụlọ ahụ zuru oke. Ọ bụrụ na ọrịa nke anụ - a na-etinye oge ogwu a ruo mgbe ọ gbakere.
Na-aguta banyere ụdị anụ ndị dị na rabbits dịka: Soviet chinchilla, nnukwu ọcha, Venti, oke bekee, Bekee, California rabbit, Flandre na New Zealand rabbit.
Na atụmatụ nke ịgba ọgwụ mgbochi nke rabbits si myxomatosis:
Nke mbụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-eme na mmiri, afọ ole na ole nke anụmanụ a na-vaccinated bụ ọnwa 4.
Nke abụọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa - ụmụ anụmanụ na ọgwụ mgbochi ọrịa 4 izu mgbe mbụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Nke atọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa - oke bekee ka injected ogwu 5-6 ọnwa mgbe mbụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
A na-egbochi ọgwụ mgbochi ọ bụla nke ụmụ anụmanụ vaccinated ugboro abụọ (na mmalite oge opupu ihe ubi na mbubreyo mgbụsị akwụkwọ).
A na-ejikọta ọgwụ mbụ nke nwa anụmanụ na-eto eto (otu ogwu ọgwụ) ma ọ bụghị nke oke nke oke bekee, dị ka oge mmiri. Ebe ọ bụ na anwụnta bụ ndị na-ebu myxomatosis, a na-eme ọgwụ mgbochi na mmiri, ozugbo ọ na-adị ọkụ maka ikuku anwụnta na-amalite.
Ọrịa nje ndị ọzọ nwere ike izere rabbits.
Pasteurellosis, salmonellosis (paratyphoid fever), rabies na listeriosis: ụmụ anụmanụ ndị a zụrụ ọhụrụ na-agba ọgwụ megide nje ndị a n'ụbọchị mbụ mgbe ha nwetasịrị site n'enyemaka nke ịgba ọgwụ mgbagwoju anya. Mgbe ị na-eji ọgwụ ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye megide ọrịa ọ bụla, ọ dịkarịa ala ụbọchị 14 ga-agafe n'etiti ịgba ọgwụ mgbochi.
Ị ma? Myxomatosis bụ ngwá agha mbụ e ji eme ihe megide ụdị nile ahụ. N'afọ 1950, a malitere ịrịa ọrịa a n'etiti ndị rabaị Australia, bụ nke n'oge a ghọrọ ọdachi mba, ebe ha na-eri ahịhịa niile, na-ahapụ ihe ọ bụla maka anụmanụ ndị ọzọ. N'ihi mgbukpọ ahụ, ọnụ ọgụgụ rabbits dị n'Australia abawanyela, na myxomatosis agbasawo n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, ya mere, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịzụlite rabbits na-enweghị ọgwụ mgbochi megide ọrịa ndị na-ebu nje.
N'ọkwà ụlọ ahụ ka a ga-arụnye ụlọ maka nri na ndị na-aṅụ mmiri, rabbits kwesịrị ịnweta ohere ọ bụla na ha. Ndị mmadụ na-ejupụta nri mgbe nile. A na-agbanwe mmiri n'ite mmanya ugboro abụọ n'ụbọchị. Onye ọ bụla nwere ike 'iri' ruo ugboro 50 n'ụbọchị. Ndị na-ere nri ndị a anaghị edozi nri ma na-enwe obi ụtọ ịbanye na nri niile a chọrọ.
N'oge ọkọchị, a na-etinye ihe oriri na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. A na-eri omenala nke agwa, nri ha na-ebelata mkpa maka nri granulated, ma si otú ahụ belata ego nke ịkọ ihe. Maka n'arọ 10 nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke mkpụrụ osisi leguminous, enwere 25 g nke protein dị ukwuu digestible. Ụmụ anụmanụ na-eri nri: ọhụrụ, na-asacha akwụkwọ nri (carrots, sugar beet and table), ọka, ọka na nri kwesịrị ekwesị.
Ọ dị mkpa! N'oge okpomọkụ maka rabbits, chicol ga-egbute hay. Oge kachasị mma maka ịchụ ego dara na June-July. Na oge a, ahihia kacha jupụta na protein ma nwee oke oriri bara uru.
N'oge oyi, ụmụ anụmanụ na-eri nri dịgasị iche iche: ha na-eri ahịhịa ahihia, sie na nri ọhụrụ, ọka (ọka, ọka bali, ọka wit). Ihe di mkpa maka uru bara oke uru nke ndi na-eme ka o buru ibu bu ihe mgbakwunye na nri di iche iche a na-eri kwa ubochi.
Mkpụrụ akwụkwọ ọhụrụ, dị ka beets na carrots, kwesịrị ịdị kwa ụbọchị na ndepụta. N'oge oyi, nke a dị mkpa n'ihi eziokwu ahụ bụ na ntanetị mkpụrụ nke rabbits na-eme ka akpịrị ịkpọ nkụ gụchaa ha. Ịṅụ mmiri ọṅụṅụ na ndị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ n'oge a bụ ihe na-erughị n'oge okpomọkụ.
Akara ngwakọ nke broiler ìgwè nke rabbits na-echekwa naanị site keakamere insemination. Maka usoro a, nanị ihe onwunwe (anụ), nke a zụrụ n'ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Hipfarm, dị mma. Mgbalị niile ị na-eme ịzụlite ụdị ọmụmụ a site n'inwe mmekọahụ na njikọ ụkọ fatịlaịza dara. N'oge ugbua a, achoputara na na nke a, umuaka enweghi ihe ndi mara nke umu.
Ị ma? N'ime ọhịa, rabbits na-ebi na burrows, na-eke usoro dị mgbagwoju anya nke n'okpuruala n'okporo ụzọ na ọtụtụ ụzọ nbata na ọpụpụ. Ezinụlọ ndị rabaị nke ọtụtụ nwanyị na nwoke nwere ikike nke ya, ebe isi nwanyị na-achị. N'ime oghere ebe ụmụ nwoke na-ebi, usoro nchịkọta dị iche iche na-egosipụtakwa. Nwoke kachasị nwoke na-enwe ọtụtụ uru. Ọ na - enweta ebe kacha mma, na - amalite iri nri ma na - eme ihe ike n'inwe ike ịchịkwa.
Nlekọta nke anụ anụ nke rabbits chicol bụ ọrụ dị oke uru. Nke a bụ ihe kpatara ọganihu nke broiler hybrid na ịzụlite rabbits. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịchọta ndị na-emepụta ozuzu ma ọ bụ ụmụ anụmanụ na-eto eto maka ịzụlite na ihe ngosi, na nurseries ma ọ bụ n'aka ndị nnọchiteanya nke ụlọ ọrụ Hipfarm.